Galata 4 - Ny Baiboly
12Mihanta aminareo aho, ry rahalahy, aoka ho tahaka ahy hianareo, fa izaho koa mba efa tahaka anareo ihany. Tsy naninon-tsy naninona ahy akory hianareo. 13Fony aho vao nitory voalohany ny Evanjely tany aminareo, dia hitanareo ny halemen'ny nofoko, ary tonga fakam-panahy ho anareo izany; 14nefa tsy mba naneso na nihataka tamin'izany hianareo, fa vao mainka koa nandray ahy toy ny anjelin'Andriamanitra na tahaka ny Kristy Jesoa aza. 15Koa lasa nankaiza àry ilay fankamamianareo ahy nahasambatra anareo? Fa izaho no vavolombelonareo fa raha azo natao, na dia ny masonareo aza, dia ho nombotanareo homena ahy fahizany. 16Sa dia tonga fahavalonareo indray aho, fa nilaza ny marina taminareo? 17Tsy rariny ny ataon-dry zareo mila fitia aminareo, fa tadiaviny hihataka aminay hianareo, mba hiraiketanareo aminy kosa. 18Tsara izany ilan'olona fitia, raha amin'ny zavatra tsara, mandrakariva anefa fa tsy hoe raha eo aminareo ihany aho. 19Anaka, aminareo aho dia mijaly hoatra ny mihetsi-jaza indray, mandra-paharin'ny Kristy ao anatinareo. 20Endrey izany faniriako ho eo aminareo ankehitriny, sy hanova ny feoko, fa mahasanganehana ahy loatra ny aminareo.
21Etsy ange, hianareo izay te-ho eo ambanin'ny Lalàna e: tsy renareo va ny vakin'ny Lalàna? 22Voasoratra ao fa nanan-janaka roa lahy i Abrahama, ny iray tamin'ny andevovavy, ary ny iray tamin'ny olona afaka. 23Ilay zanak'andevovavy, nateraka araka ny nofo; ary ilay zanak'olona afaka, araka ny fampanantenana. 24Ohatra amin'ny fanekena roa izy roa vavy ireo: ny iray moa, avy amin'ny tendrombohitr'i Sinai, miteraka ho amin'ny fanandevozana, dia Agara izany 25(satria Agara no fiantso ny tendrobohitr'i Sinai any Arabia), ary Agara dia ohatra amin'i Jerosalema ankehitriny, fa samy andevo izy sy ny taranany. 26Fa Jerosalema any ambony izay renintsika kosa, dia tsy mba andevo; 27fa voasoratra hoe: Mifalia, ry momba, dia hianao izay tsy niteraka! Miantsoa mafy amin-kafaliana sy firavoravoana, hianao izay tsy mbola nihetsi-jaza! Fa ny zanaky ny mananotena no maro noho ny an'izay manam-bady!
28Isika, ry rahalahy, no zanaky ny fampanantenana toa an'Isaaka. 29Fahizany anefa, ilay zanaka araka ny nofo dia nanenjika ny zanaka araka ny fanahy, ary toraka izany ihany koa ankehitriny. 30Saingy ahoana hoy ny Soratra Masina? Roahy io andevovavy io sy ny zanany, fa tsy hiray lova amin'izay zanak'andevo ny zanak'olona afaka. 31Koa amin'izany, ry rahalahy, tsy zanak'andevo isika, fa zanak'olona afaka. >
Powered by CI-CMS Version 2.0.0.0 | Page rendered in 0.0441 seconds